စစ်အစိုးရ လမ်းပြမြေပုံ ခရီးမပေါက်နိုင်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝေဖန် 24 July 2008 အာဆီယံ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ နှင့် အတူတွေ့ရသောမစ္စကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်။ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၀၈။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြား ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေး ရှင်သန်ပြန့်ပွားရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ လမ်းချော်ထွက်နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကွန်ဒိုလီဇာ ရိုက်စ် (Condoleezza Rice)က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းဘေးသင့် ဒုက္ခသည်တွေ ကူညီရေး နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေလက်ခံဖို့ အစောပိုင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ၀န်ကြီးရိုက်စ်က ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်နေတဲ့ ၀န်ကြီး ရိုက်စ်က ဒီနေ့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံဟာ အတုအယောင်သဘောမျိုး ဆောင်နေတာကြောင့် ဘယ်ကိုရောက်မယ့် လမ်းညွှန်မြေပုံ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်တွန်းကြဖို့ရှိပါတယ်။ အာဆီယံပေါ် ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်၏ တိုက်တွန်းချက်အား မြန်မာအတိုက်အခံများ ကြိုဆိုကိုသက် | ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၀၈အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်က အာဆီယံ အနေနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအတွက် ပိုမို လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ပြောဆိုမှုကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်းအားစုများက ကြိုဆိုလိုက်သည်။အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် (ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ) စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လတ်တလောကျင်းပလျက်ရှိသည့် အာဆီယံဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအစည်းအဝေး၌ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအား အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်က ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ကွန်ဒိုလီဇာရိုက် (စ်) ပြောတာကတော့ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေ အားလုံးလိုချင်တဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်တဲ့စကားတွေလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တိုက်တွန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့က မူလကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့်သဘောထား ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်ပြောသည်။၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုထွန်းမြင့်အောင်က “အမေရိကန်က နိုင်ငံတခုချင်းအနေနဲ့ကော လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ အာရှနိုင်ငံများ အနေနဲ့ပါ နည်းလမ်းအမျိုးစုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် တလျှောက် လုံးလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက အာဆီယံအဖွဲ့ကို ဖိအားပေးမှုများရှိခဲ့ သော်လည်း ၎င်းအဖွဲ့က လက်တွေ့ကျသည့် အစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဟုလည်း ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။“မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ကိုင်တွယ်ရခက်တာကို သူတို့ (အာဆီယံ) သိတယ်၊ မြန်မာဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာ အရှုပ်ထုပ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုမျိုးမရှိဘူး။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်းဖိုးထားမှုကိုက လျော့နေတယ်လို့မြင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးအလေး ကဲနေတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်” ဟု ကိုထွန်းမြင့်အောင်က သုံးသပ်သည်။မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးသည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ ပြေလည်စေရေးအတွက် အဓိကအချက်တချက်ဖြစ်သောကြောင့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထပ်မံတောင်းဆိုထားပြီး မေလအတွင်း က ဒေါ်စုအား အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းတနှစ် ထပ်တိုးလိုက်သည့်အပြော လွန်စွာစိတ်ပျက်မိသည်ဟုလည်း စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျော့ယို က ပြောဆိုသည်။အာဆီယံဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှုပါဝင်သည့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်စာတမ်းကို စစ်အစိုးရကိုယ်စား ယခုအပတ် တင်္နလာနေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။“အာဆီယံအသိုင်းအ၀န်းမှာ လူအခွင့်အရေးကို လူတိုင်းခံစားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက သဘောတူတာကို ကျနော်တို့ ကျေနပ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးရုံတင်မက တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အာဆီယံ အဖွဲ့ကိုလည်း စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအပြင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေချင်ပါတယ်” ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို နအဖ စစ်အစိုးရက တင်းခံခဲ့ရာ အာဆီယံအဖွဲ့က ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးခဲ့သဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ ရန်ကုန် ဈေးကွက် အသားဈေး ဆက်လက်မြင့်မားလျက်ရှိကြည်ဝေ | ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၀၈ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင်းသို့ ကြက်သား၊ ဘဲသားဝင်ရောက်မှုမှာ ပုံမှန်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဝင်ရောက် လျက်ရှိသောကြောင့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်မားလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အသားဈေးနှုန်းများမှာ အသားတိုးကြက် တပိဿာ ၈၅၀၀ ကျပ်၊ တိုင်းရင်းကြက် တပိဿာ ၉၀၀၀ ကျပ်၊ ဘဲသား တပိဿာ ၈၀၀၀ ကျပ်ဈေး ပေါက်လျက်ရှိသည်။ “နောက်လာမယ့် လတွေမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ဈေးမာနေဦးမယ့် အနေအထားရှိနေတယ်၊ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ ကြက် ခြံတွေ၊ ဘဲခြံတွေ နေရာကို ခုချိန်ထိ အစားမထိုးနိုင်သေးဘူး၊ အဲဒါက ဈေးတက်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းပဲ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ အသားတိုး ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ကြက်ကောင်ရေ ၁.၆ သန်း ကျော်နှင့် ဘဲကောင်ရေ ၆ သိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ စာရင်းထုတ်ပြန်သည်။ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမှ ကြက်ခြံများဆုံးရှုံးသွားသည့်အတွက် ရန်ကုန်ဈေးကွက်လိုအပ်သည့် ကြက်သား၊ ဘဲသား နှင့် ဥများကို ပဲခူးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် အထက်မြန်မာပြည်တို့မှ တင်သွင်းမှာယူနေရကြောင်း သိရှိရသည်။နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ကြက်၊ ဘဲ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးမှုရှိ ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း ကြက်သားဝင်ရောက်မှုမှာ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့သို့နေ့စဉ် ကြက်သားဝင်ရောက်မှုမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တိုင်းရင်းကြက် ပိဿာချိန်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ခန့်၊ အသားတိုးကြက် ပိဿာချိန်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ခန့်သာရှိသည်ဟု ရန်ကုန် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ကြက်၊ ဘဲ ဒိုင်မှ စာရင်းများ အရ သိရှိရသည်။ မုန်တိုင်းမတိုက်မီက ပုံမှန်အားဖြင့် ပိဿာချိန်ပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော် မှ ၄၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် ၀င်ရောက် ခဲ့သည်။ထို့ပြင် ကြက်ဥ၊ ဘဲဥများမှာလည်း ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ဈေးနှုန်းများမှာလည်း ကြက်ဥ တလုံး ကျပ် ၁၃၀၊ ဘဲဥ တလုံး ကျပ် ၁၅၀ နှုန်းရှိသည်။ ယခင်မုန်တိုင်းမတိုက်မီက ကြက်ဥတလုံး ကျပ် ၁၀၀၊ ဘဲဥ တလုံး ကျပ် ၁၂၀ ဈေးရှိခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးစ ကာလများတွင် ကြက်ဥ၊ ဘဲဥဈေးနှုန်းမှာ ၃ လုံး ၁၀၀၀ ကျပ် နှုန်းအထိ မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ဘဲဥ၀င်ရောက်မှုမှာ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ အလုံးရေ ၄ သိန်းခန့် ၀င်ရောက်ပြီး ကြက်ဥ ၀င်ရောက်မှုမှာမူ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း အလုံးရေ ၃ သိန်းခန့် နေ့စဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း ဒိုင်အ၀င် စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။နာဂစ်မုန်တိုင်းမတိုင်မီက ကြက်သား တိုင်းရင်းကြက် တပိဿာ ၇၀၀၀ ကျပ်ဈေး၊ အသားတိုး ကြက် တပိဿာ ၆၅၀၀ ကျပ်၊ ဘဲသားမှာလည်း တပိဿာ ၆၀၀၀ ကျပ်ဈေး ရှိသည်။“အခြေခံလူတန်းစား အနေနဲ့ကတော့ ကြက်သားမစားနိုင်တာ ကြာပြီ၊ အခု ဒီဈေးနှုန်းကြောင့် လူလတ်တန်းစားတွေကပါ ကြက်သားစားဖို့ တော်တော့်ကို စဉ်းစားလာကြတာတွေ့ရတယ်၊ အခုရောင်းနေရတာက ဒံပေါက် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စားသောက် ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေပဲ”ဟု မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့် ကြက်အရောင်းဒိုင် လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောဆိုသည်။ကြက်သားဈေး ကြီးမြင့်မှုကြောင့် လူနေရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ ပုံမှန်ကြက်သားရောင်းအား၏ ထက်ဝက်ခန့် ကျဆင်းလျက် ရှိပြီး စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင်သာ ပုံမှန်ဝယ်ယူလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။လက်ရှိ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်အများစုတွင် ကြက်သားဈေးနှုန်းများမှာ မြင့်မားလျက်ရှိသောကြောင့် ကြက်သား အရောင်းဆိုင် များမှာ ဈေးဦးမပေါက်သော နေ့များပင်ရှိနေကြောင်း ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်မှ ကြက်သားရောင်းသူ တဦးက ပြောသည်။“ဒီဘက်မှာရောင်းရတာက ဘဲဥကြက်ဥဆိုရင်လည်း အကွဲတွေ၊ သိပ်မလတ်တော့တဲ့ ပုတ်ခါနီးတွေပဲရောင်းရတာ၊ ကြက်သား ကတော့ ၀ယ်စားတဲ့သူ အတော့်ကိုနည်းသွားပြီ၊ ကြက်ခေါင်းတို့ ခြေထောက်တို့ပဲ ရောင်းရတယ်” ဟု အထက်ပါ ကြက်သား ရောင်းသူ က ဆိုသည်။ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များရှိ ဈေးများတွင် ရောင်းရသည်ဟုဆိုသော ကြက်ခြေထောက် ကြက်ခေါင်းများ၏ ဈေးနှုန်းမှာလည်း တပိဿာလျှင် ၅၀၀၀ ကျပ် ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။“အိမ်မှာ ကြက်သားချက်တဲ့နေ့ဆိုရင် သားနဲ့သမီးရယ် အိမ်က အသက် ၆၀ ကျော်အဖေနဲ့ အမေရယ်ကိုပဲ ဦးစားပေးပြီးကျွေး တော့တယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ကြက်ခေါင်းနဲ့ ခြေထောက်ကိုပါ အစိတ်သားလောက်ဝယ် ကျွေးတယ်”ဟု လစဉ်ဝင်ငွေ ၃ သိန်းခန့်ရှိသော မိသားစု တစုမှ အိမ်ရှင်မတဦးက ပြောဆိုသည်။ရန်ကုန်မြို့၏ အသားစားသုံးမှုမှာ ငါးစားသုံးမှုပမာဏ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကြက်ဥ၊ ကြက်သား စားသုံးမှုမှာ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။ သတင်းထောက် အိမ့်ခိုင်ဦးကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး သန်းထိုက်ဦး ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 2008 18:15 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ နာဂစ်လေဘေး ဒုက္ခသည်အရေး လိုက်လံ သတင်းယူသဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသော Ecovision ဂျာနယ် သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေတရားရုံး၌ ယနေ့ ရုံးထုတ် စစ်ဆေးလိုက်သည်။ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲခံထားရသူ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တရားလိုသက်သေ ဒု-ရဲအုပ် ဇော်မင်းညွန့် မပါရှိသော်လည်း သက်သေ ၁၈ ဦးဖြင့် ယနေ့တွင် ရုံးထုတ်၍ စတင် စစ်ဆေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “အခု ရုံးချိန်မှာ တရားလို သက်သေ မလာဘူး။ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးစဉ်က သက်သေရဲတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဟာကို စစ်လိုက်တာပဲ။ တဖက်ရှေ့နေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ ၁၈ ဦးထဲမှာပါတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်ဦးဆိုတာ (တာမွေ ရဲစခန်းက) သူက ရှိနေတဲ့အတွက် သူ့ကို ဒီနေ့ စစစ်ဖြစ်တယ်” ဟု မအိမ့်ခိုင်ဦး အမှုတွဲတွင် ပါဝင်သည့် ကိုကျော်ကျော်သန့်၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်ဦးသည် အခင်း ဖြစ်ပွားသည့်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ယူအန်ဒီပီ) ရုံးရှေ့တွင် တာဝန်ကျခဲ့ပြီး အထက်က ဖမ်းမိန့်ပေးသဖြင့် သူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သက်သေ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိနှင့် ငွေဒဏ်ပါ ကျခံရနိုင်သည့် လူထုကို ဆူပူစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရုံးထုတ်ရာတွင် သူမ၏ မိသားစုဝင်များလည်း တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အမှုကိုမူ ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုလိုက်သည်။ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည် ၃ဝ ခန့်က ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ (အန်ဂျီအို) များထံ သွားရောက်၍ အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် မအိမ့်ခိုင်ဦးက သတင်းလိုက်ယူရင်း တာမွေမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ယူအန်ဒီပီ ရုံးရှေ့တွင် ကိုကျော်ကျော်သန့်နှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ယခုလ ၂ ရက်နေ့က အမှုရက်ချိန်း စတင်ရှိခဲ့သော်လည်း သူတို့နှစ်ဦး၏ ရှေ့နေများက အမှုကို ထပ်မံ လေ့လာလိုသဖြင့် ယနေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။မအိမ့်ခိုင်ဦးသည် အဖမ်းမခံရခင်က ရန်ကုန်အခြေစိုက် အပတ်စဉ်ထုတ် Ecovision ဂျာနယ်တွင် သတင်းထောက်အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သည်မှာ ၂ လခန့်သာ ရှိသေးသည်။ Ecovision ဂျာနယ်ကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေကာ ယခင်က စီးပွားရေး ကဏ္ဍကိုသာ ဦးစားပေး ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအပြင် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ဆောင်းပါးများကိုပါ ထည့်သွင်း ထုတ်ဝေလာခဲ့သည်။ မန္တလေးလေဆိပ် တယ်လီဖုံးလိုင်းများ ပြတ်တောက်၊ လေယာဉ်ပုံမှန်ပြေးဆွဲ နန်းဒေ၀ီ ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 2008 12:17 - မြန်မာစံတော်ချိန် နယူးဒေလီ။ ။ မန္တလေးတွင် ယမန်နေ့ညက မိုးသည်းထန်စွာရွာခဲ့သည့်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းရှိ မြေအောက်စက်ပစ္စည်းခန်းများ ရေဝင်ပြီး တယ်လီဖုံးလိုင်းများ ပြတ်တောက်နေသည်။ကွန်ပြူတာခန်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခန်းများ ရေဝင်ကာ တယ်လီဖုံးလိုင်းများ ပြတ်တောက်နေသော်လည်း လေယာဉ် ခရီးစဉ်များ ပုံမှန်ပျံသန်းပြေးဆွဲလျှက်ပင်ရှိသည်။ယနေ့ နံနက်တွင် မြစ်ငယ်တံကား ရေကျော်မှုဖြစ်ပွားကာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေးကားလမ်း လေယာဉ်ကွင်း သွားရာ လမ်းတလျောက် ရေလွမ်းခဲ့၍ လေယာဉ်စီးမည့်ခရီးသည်များကို ကားကြီးများနှင့် ပြောင်းလဲပို့ဆောင် ပေးခဲ့ရသည်။“ လေယာဉ်ကွင်းတော့ ရေမလျှံဘူး။ ဒါပေမဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲကို ရေဝင်တော့ လောလောဆယ်တော့ လေယာဉ်ကွင်းက ဖုန်းလိုင်းတခုမှ ခေါ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ မိုဘိုင်းတွေဘဲခေါ်ရတယ်” ဟု Air Mandalay လက်မှတ်အရောင်းကောင်တာ ဌာနချုပ်ရှိရာ မန္တလေးမှ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။“ညနေပိုင်းလောက်ဆို ရေပြန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်” ဟု သူကပြောသည်။ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာ့အရေး ‘မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအုပ်စု’ နှင့်တွေ့ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 2008 15:49 - မြန်မာစံတော်ချိန် နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ရန်နှင့် သူ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ‘မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအုပ်စု’ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အစည်းအဝေးတရပ် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၏ သြဇာဖြင့် ကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေးနေမှုနှင့် ကြိုးပန်းချက်များကို မိမိတို့က ထောက်ခံပါကြောင်းဖြင့် ဤအုပ်စုက ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသွားကြပါသည်” ဟု ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောကြားသွားပါသည်။စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်တကြိမ် သွားရောက်မည့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စစ်အစိုးရကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် ဖြစ်စဉ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိစေရေး၊ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ဆက်သွယ်ရေး အပါအဝင် သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှု တစုံတရာကို ပြသရန် လိုအပ်ကြောင်း ဤအုပ်စုက တချိန်တည်းတွင်ပင် အလေးထား၍ ပြောကြားသွားပါသည်။ဤအစည်းအဝေးသို့ သြစတြေလျ၊ တရုပ်၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေ၊ ရုရှ၊ စင်္ကာပူ၊ ကိုရီးယား သမတနိုင်ငံ၊ ထိုင်း၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဗီယက်နမ်၊ ဥရောပ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအုပ်စုသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင် ဖွဲ့စည်းပြီးကတည်းက လေးကြိမ် တိုင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤအုပ်စုကို မြန်မာစစ်အစိုးရက စက်တင်ဘာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းပြီးကတည်းက စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲများ ပြီးကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် ဤပြဿနာ ကြုံနေရသော အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံသို့ သြဂုတ်လလယ်တွင် ထပ်မံ လာရောက်လည်ပတ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ချမှတ်ထားသော ဖိအားများ သက်သာရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေးကို အသုံးချတတ်သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အစဉ်အလာကြောင့် မြန်မာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီများက မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ယခု လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်အပေါ် သိပ်မျှော်လင့်ချက် မထားကြောင်းနှင့် သိသာထင်ရှားသည့် ရလဒ်တစုံတရာ ပေါ်ထွက်လာမည်ဟုလည်း မမျှော်လင့်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုကြပါသည်။ယခင် သူ၏ခရီးစဉ် ၃ ကြိမ်အတွင်း မြန်မာ့အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။သို့သော် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲများသည် ခဏသာခံပြီး စစ်အစိုးရကလည်း ဆက်လက် ပြုလုပ်လိုသည့် အရိပ်လက္ခဏာ မပြခဲ့ပါ။ နယ်ဆန်တင်ပို့ခွင့် အဓမ္မပိတ်ထား၍ ရန်ကုန်ဆန်ဈေးအေးNEJ/ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ရန်ကုန်ဆန်ဈေးကွက်တွင် ဆန်ဈေး ပုံမှန်ဖြစ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌက ပြောဆိုသော်လည်း ဆန်ကုန်သည်များ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရောင်းဝယ် မရအောင် ကန့်သတ်ထားချက်များကြောင့် ဆန်ဈေး ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်ဆန်ကုန်သည်ကြီးများက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့က ဆန်များကို မန္တလေးတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလွဲ၍ အခြားဒေသများ တင်ပို့ ခွင့်ကို အာဏာပိုင်များ ပိတ်ထားသည့်အတွက် ရန်ကုန်ဆန်ဈေး အေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆန် ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။ သို့သော် မန္တလေးတိုင်းအတွက် တနေ့ ဆန်အိတ် (၁) သောင်းခွဲ၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွက် တနေ့ အိတ်ရေ (၁) သောင်းထက်ပို၍ တင်ပို့ခြင်းမလုပ်ရန် ဆန် ကုန်သည်များကို ကန့်သတ်ထားပြန်သည်။ဆန်ကုန်သည်များကို ရန်ကုန်ပြင်ပ အခြားတိုင်းများသို့ ဆန်တင်ပို့ခွင့် ပိတ်ထားသော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးကို သူ့ကိုယ်ပိုင်ပွဲရုံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ဆန်တန်ချိန် (၅) သောင်း ရောင်းချခွင့်ပေးထားသည့်အတွက် ဆန်ကုန်သည်များ မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန်ကုန်သည်ပေါင်း (၁,၀၀၀) ကျော်ရှိပြီး လောလောဆယ် ဆန်ကုန်သည်တဦးကို တလ ဆန်အိတ် (၃၀၀) သာ ရောင်းရန် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာဥက္ကဋ္ဌက ပါမစ်ချပေးထားသဖြင့် ဆန်ကုန်သည်များ ရောင်းစရာ နယ်ပို့စရာ ဆန်မရှိ ဖြစ်နေသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းတွင်လည်း ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ ကျိုက်လတ်စသည့် မြို့များရှိ ဆန်စက်အများအပြား မလည်နိုင်ဘဲ ရပ်နေရသည်။ လောလောဆယ် ရန်ကုန်ဝင်သည့် ဆန်များသည်လည်း နာဂစ်ဆန် ခေါ် ရေစိုဆန်ဝါများဖြစ်သည်။ အညာမှာ မိုးခေါင်သည့်အတွက် ခိုင်းနွားများကို နှမ်းဖတ်၊ ပဲဖတ် မကျွေးနိုင်တော့ဘဲ ဆန်ဝါကျွေးလျှင် တွက်ခြေကိုက်သော်လည်း တင်ပို့ခွင့်မရှိ ဖြစ်နေသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။ဘုရင်နောင် ဆန်ပွဲရုံတခုလျှင် အကြမ်းအားဖြင့် အလုပ်သမားတဦးကို တနေ့ ကျပ် (၃) ထောင်နှင့် အလုပ်သမား (၅) ဦးခန့်အတွက် ကုန်သည်က နေ့စဉ်ရှာပေးနေရသလို ပွဲရုံခက တလ ကျပ်ငွေ (၅) သိန်းပေးနေရ၍ လက်ရှိဆန်ဈေး တားဆီးမိန့်များနှင့် ရောင်းဝယ်ရ တွက်ခြေမကိုက်ဟု စုံစမ်း သိရသည်။ ထိုအတောအတွင်း ဒီဇယ်ဈေးက တပေပါကို ကျပ်ငွေ (၃) သိန်းကျော်သည့်အတွက် အညာက ရန်ကုန်ဆင်းသည့် ကုန်တင်ကားများ အပြန်ဆန်လည်းမရ၊ အောက်ခံကုန်လည်းမရဘဲ ရန်ကုန်မှာ သောင်တင်နေသည်ဟု ကားပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။ရန်ကုန် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများကမူ အာဏာပိုင်များဘက်က ဆန်တင်ပို့ခွင့် ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ်ချက် တွေ ဖယ်ရှားပြီး လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးစေချင်သည်။ သို့မှသာ ဈေးကွက်ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နိုင်မည်ဟု ပြောပြသည်။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် သောက်သုံးရေပြဿနာကြုံတွေ့NEJ/ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အပြင်းထန်ဆုံးခံရသော ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း သောက်သုံးရေပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရပြီး လာမည့်ရာသီတွင် ယခုထက်ပိုဆိုးနိုင်ကြောင်း လေဘေးသင့်ခံရသည့် ဒေသခံ ရွာသားများက ပြောသည်။ရေကန်များတွင် နာဂစ်ဖြစ်ပြီးစ အလောင်းများ၊ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းရာ၌ (၂) လကြာမှ ရှင်းလင်းရသည့်ကန်များ ရှိသကဲ့သို့ (၁) လအတွင်း ရှင်းသည့်ကန်များလည်းရှိကြောင်း၊ သို့သော် အဆိုပါကန်များသည် သောက်သုံး၍မရသေးဘဲ နီးစပ်ရာကျေးရွာအချင်းချင်း သောက်သုံးရေ မျှတ သုံးစွဲနေရသည်ဟု ဒေးဒရဲမြို့နယ်မှ သောကြာရွာသားတဦးက ပြောသည်။“ဒေးဒရဲမြို့နယ်က ကံဆိပ်ကျေးရွာရှိ ရေကန်တွေလည်း သုံး၍မရသေးဘဲ စွယ်တော်ကုန်း ရွာဘက်က သုံးလို့ရတဲ့ ရေမ၀င်ဘဲ ကျန်နေတဲ့ ရေကန်တကန်မှာ သွားခပ်နေရတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လပွတ္တာ၊ ဖျာပုံ၊ ငပုတော၊ ဒေးဒရဲ၊ ဘိုကလေး၊ မော်ကျွန်းတို့တွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ ရေပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ငပုတောတွင် သက်ကယ်သောင်ကျေးရွာနှင့် အုန်းချောင်းရွာများတွင် ရှိသည့် ဦးကျော်သောင်းကန်၊ လယ်တောကန်၊ ကောင်စီကန် စသည့် ကန်များသည်လည်း သုံးမရဖြစ်နေ ကြောင်းသိရသည်။ဒေးဒရဲမြို့နယ်အတွင်း မကျဉ်းကံကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကံဆိပ်ရွာတွင် ရေကန် (၃) ကန်၊ ကံစုတွင် (၂) ကန်၊ စွယ်တော်ကုန်းတွင် (၂) ကန်၊ ကျုံဇမင်းတွင် (၁) ကန်နှင့် ဖိုးချမ်းကြီးရွာတွင် (၁) ကန်ရှိပြီး သောကြာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယခုနှစ်မှ အသစ်တူးသော ရေကန် (၄) ကန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ယခုအချိန်တွင် မိုးရွာနေ၍ မိုးရေကိုခံကာ သောက်နိုင်သော်လည်း မိုးမရွာသည့်အခါ ရေပြဿနာ အလွန်ရောက်ကြရကြောင်း ရွာသားများက ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏ လေ့လာချက်အရ လေဘေးသင့်ဒေသများရှိ ရေတွင်း ရေကန် များ၏ (၃၅) ရာခိုင်နှုန်းသည် မသန့်ရှင်းသည့်အတွက် စိတ်ချရသည့် အနေအထားတွင် မရှိ ကြောင်း ကြက်ခြေနီအသင်း၏ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။၎င်းက “သောက်သုံးရေ သောက်သုံးနိုင်ဖို့ အမှိုက်တွေကို ဆယ်တင်ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်” ဟု ပြောသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တွင်လည်း သောက်သုံးရေကန် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်း ပျက်ခဲ့ပြီး အခြားမြို့နယ် များတွင်လည်း အပျက်အစီးများကြောင်း၊ အဆိုပါမြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာများသည် ရေကန်ကိုသာ အားထား သောက်သုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရက ပျက်စီးရေကန်များကို ပြန်လည်ပြုပြင် ပေးခြင်းမပြုဘဲ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့(ဆွစ်ဇာလန်) ICRC၊ မြန်မာ့ကြက်ခြေနီ၊ အခြားအန်ဂျီအိုများနှင့် ပုဂ္ဂလိကစေတနာရှင်းများသာ လာရောက်ဖော်ပေးကြကြောင်း သိရသည်။မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေးနှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တို့တွင် ရေသန့်စင်စက်များ တပ်ဆင်ပေးခဲ့သော်လည်း ရေချိုကိုသာ သန့်စင်ပေးနိုင်၍ ရေငန်ကို သန့်စင် ၍မရကြောင်း သိရသည်။ယခုအခါ မိုးရေများကို ခံပြီး ရေထည့်ကန်ငယ်များ တနိုင်တပိုင် ပြုလုပ်၍ သောက်သုံးနေကြရ၍ အချို့မိသားစုများသည့် အိမ်များတွင် အခက်အခဲကြုံနေပြီး နွေရာသီရောက်ပါက သောက်သုံးရေ အတွက် မစဉ်းစားတတ်အောင် ဖြစ်နေကြကြောင်း ရွာသားများက ပြောသည်။ မြန်မာမုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များကို စနစ်တကျကူညီရန် အလှူရှင်နိုင်ငံများအား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တောင်းဆိုHRW/ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာ၌ ပြီးပြည့်စုံသော အား ထုတ်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု ရှိစေရန်အတွက် လွတ်လပ်သော ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တခု ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) က နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်နိုင်ငံများကို ယမန်နေ့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ယင်းတိုက်တွန်းချက်ကို HRW မှ အာရှဌာနခွဲ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဘရဒ် အဒမ်က အိပ်ဖွင့် ပေးစာအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့က ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲသင့်ကြောင်းလည်း အကြံပြုထားသည်။အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်ထည်ဖော်ရာတွင် အလှူရှင်များနှင့်တကွ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် ချမှတ်လိုက်နာသင့်သော အခြေခံမူ (၁၀) ချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ကြီးမားသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အစမပြုမီ ကူညီရေး အမြန်လိုအပ်နေသေးသော မုန်တိုင်းဘေးသင့် လူဦးရေကို ဖော်ပြပေးရေး၊ အကူအညီရောက်ရှိရေး နှေးကွေးနေသည့် မုန်တိုင်း သင့် ဒေသအားလုံးသို့ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အကူညီပေးရေးအဖွဲ့များအား သွားရောက်ခွင့်ပြုပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေစုံစမ်းခွင့်ပြုရေးတို့ကို အခြေခံမူများအဖြစ် အလှူရှင်များက တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း အိပ်ဖွင့်ပေးစာအတွင်း ဖော်ပြသည်။ထို့အပြင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူငွေများကို မြန်မာစစ် အစိုးရထံသို့ တိုက်ရိုက်ပေးခြင်းမပြုဘဲ လူသားချင်းစာနာရေး အကူညီပေးနေသော လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရန် စီစဉ်သင့်ပြီး၊ ဒေသဆိုင်ရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အလှူရှင်များက ကြီးကြပ်ရမည့်မူ ချမှတ် သင့်ကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းခြင်း၊ အဓမ္မနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် မြေယာသိမ်းယူခြင်းကဲ့သို့သော လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများ ရှိနေသဖြင့် ယခု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း ယင်းသို့ မဖြစ်ပွားစေရေး ကြီးကြပ်ရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ စီမံကိန်းများကို စဉ်းစားတွက်ချက်ခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် ဘေးဒဏ်သင့်သူများ၊ လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသော လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်သင့်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေသည့် မည်သို့သော စစ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီ (သို့) ၎င်းတို့က ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (သို့) ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကိုမျှ စီမံကိန်းများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် စာချုပ်များ ပေးအပ်ခြင်းမပြုရန်၊ အကူအညီများပေးရာတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်ကိုသာ အခြေခံပြီး စစ်အစိုးရက ပြုလုပ်ထားသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးအပေါ် အခြေခံသည့် မူကို ဆန့်ကျင်သွားရန်တို့ကိုလည်း မူများအဖြစ် အကြံပြုထားသည်။နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပျှမ်းမျှ သန်း (၃) ထောင်ကျော်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပျှမ်းမျှ သန်း (၁၅၀) လစဉ် ရရှိနေသော စစ်အစိုးရအနေဖြင့် တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများသို့ ထိရောက်သည့်ပမာဏ တစုံတရာ ထည့်ဝင်မည်ဟု တရားဝင်ပြောလာရန် လုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်မီ တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား မှုများ ရှိလာစေရန် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများကို အသုံးချသင့်ကြောင်း အိပ်ဖွင့်ပေးစာ၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ HRW က အကြံပြုသော အခြေခံမူများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဂတိလိုက်စားသည့် စစ်အစိုးရက ဆယ်စုနှစ် ချီ၍ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအား ထိရောက်သည့် အကူအညီများ ပေးရာတွင် အခက်အခဲ မည်မျှကြီးမားသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း အိပ်ဖွင့်ပေးစာ၌ နိဂုံးချုပ်ဖော်ပြထား သည်။ ။ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူ၏ ရုပ်ရှင်ကား ရုံတင်မည်NEJ/ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီကျော်သူ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်သည့် ရုပ်ရှင်ကား ဇူလိုင် (၂၅) ရက်၌ ရုံတင်မည်ဟု သိရသည်။အဆိုပါ ဇာတ်ကားသည် အကယ်ဒမီ ကျော်သူနှင့် အကယ်ဒမီ မို့မို့မြင့်အောင်တို့ ခေါင်းဆောင်ပြီး စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ သက်မွန်မြင့်တို့ ပါဝင်သည့် ရင်ခုန်နှင်းဆီအမည်ရ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် (၂၅) ရက်နေ့မှစပြီး ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ၊ သွင်နှင့် မင်္ဂလာရုံတို့တွင် ရုံတင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ရင်ခုန်နှင်းဆီဇာတ်ကားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ အမည်မဖော်လိုသူ တာဝန် ရှိသူတဦးက “ဒီဇာတ်ကား ပြသခွင့်ရဖို့ ရုပ်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းကို ကျနော်တို့ သီးသန့် အသနားခံစာ တင်ရတယ်။ တင်ပြထားတာ ကြာပြီ၊ ခုမှ သူတို့က ခွင့်ပြုတာ။ ခွင့်ပြုလို့ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာ ထည့်တာတောင် ကိုကျော်သူရဲ့ ပုံကို ဖော်ပြခွင့်မရဘူး။ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရတာ ကျနော်တို့ ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်တကားလည်း အသနားခံစာ တင်ထားတယ်” ဟုပြောသည်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကိုကျော်သူသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး အခမဲ့ သယ်ဆောင်မီးသဂြုင်္ိဟ်ပေးခြင်း၊ အခမဲ့ ဆေးကုသပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူများကို ကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ သံဃာများ ဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလ၌ ကိုကျော်သူသည် သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ မောင်သူရခေါ် ဇာဂနာ၊ အခြား အနုပညာရှင်၊ စာရေး ဆရာ၊ ကဗျာဆရာများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး သပိတ်မှောက် သံဃာတော်များ၏ ဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝစ္စ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ နအဖစစ်အစိုးရက သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် သပိတ်မှောက်ကံဆောင်မှုကို နှိမ်နင်းစဉ် ကိုကျော်သူနှင့်ဇနီးကိုပါ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ကိုကျော်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခွင့်အပါအ၀င်၊ စာပေအနုပညာ အလုပ်လုပ်ခွင့် များကို ပိတ်ပင်ခဲ့ရုံမက ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်း နာမည်ကိုပင် ဖော်ပြခွင့် မပြုခဲ့ပေ။ ထိုသို့ တားမြစ်လိုက်ချိန်က ကိုကျော်သူအနေဖြင့် ရိုက်ကူးပြီး၊ ရိုက်လက်စ ဗီဒီယို ကားပေါင်း (၆၀) ကျော်နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး (၂) ကားကိုပါ ပြသခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်း ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ထုတ်လုပ်သူများက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ငွေကြေးမြောက်မြားစွာ ဆုံးရှုံးကြရမည် ဖြစ်၍ ပြသခွင့်ပြုပါရန် အာဏာပိုင်များထံ အသနားခံစာ တင်ပြ၊ အချို့ လက်ဆောင်များပေးပြီး လာဘ်ထိုးကြ၍ ဗီဒီယိုကားအချို့ ပြန်လည် ပြသခွင့်ရလာသည်။ ယခု ဇူလိုင် (၂၅) ရက် ရုံတင်မည့် ရင်ခုန်နှင်းဆီဇာတ်ကားသည် ပထမဦးဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူးပြီး ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်များ ပြသခွင့် ရလာသော်လည်း ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေး အပါအ၀င် အနုပညာအလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်များကိုမူ ဆက်လက်တားမြစ်ခံထားရဆဲ ဖြစ်သည်။ကိုကျော်သူ ဦးဆောင်နေသည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) သည် နာရေးကူညီခြင်း၊ ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်၍ အခမဲ့ ဆေးကုသပေးခြင်း အပြင် လေဘေးသင့် ဒေသများတွင် အလောင်းများကို မီးသင်္ဂြိုဟ်ပေးခြင်း၊ ပြည်သူများကို ကူညီကယ်ဆယ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာတွင် မြန်မာနိုင်တ၀န်း၌ နအဖစစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် သံဃာ တော်များဦးဆောင်သော အထွေထွေသပိတ်တိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူများအား ပစ်ခတ်ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ။ မဲဆောက်မှ တောင်းရမ်းကလေးများကိုဖမ်းစာရိတ္တပြုပြင်ရေးစခန်းပို့NEJ/ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က မဲဆောက်တွင် တောင်ရမ်းစားသောက်သူနှင့် ပစ္စည်းဟောင်းလိုက်ကောက်သည့် မြန်မာကလေးငယ် (၁၈) ဦးကို ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးပြီး စာရိတ္တပြုပြင်ရေးဌာနများသို့ ပို့မည်ဟု ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ပြောသည်။အဖမ်းခံရသည့် မြန်မာကလေးများမှာ အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၁၂) နှစ်ကြားရှိ ကလေးများဖြစ်သည်။ ယခင်က အလားတူ ဖမ်းဆီးခံရသည့်် ကလေးများအား မြန်မာဘက်ပြန်ပို့သော်လည်း ယခုအခါ ပြန်ပို့မည်မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်လူကြီးများ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနများကို ဆက်သွယ်ပြီး စာရိတ္တပြုပြင်ရေးဌာနများသို့ ပို့ဆောင်သွားမည်ဟု မြို့နယ်ရဲမှူးကြီး နိုင်ဖတ်စ၀ပ်တင်ကျွိက ပြောသည်။“ဒီကလေးတွေရဲ့ပြဿနာကကြီးတယ်။ ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းရင်း၊ ပစ္စည်းဟောင်းကောက်ရင်း လူမရှိတဲ့အိမ်က တွေ့တဲ့ပစ္စည်း ခိုးတယ်။ ရပ်ကွက်တွေကလည်း ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပြီး ဖမ်းခိုင်းတာတွေ မကြာခဏရှိတယ်။ ဒီအရွယ်မှာတောင် ဒီလောက်ဆိုးရင် ကြီးလာရင် ပိုဆိုး လာမယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါ ကလေးငယ်များကို မဲဆောက်ရဲစခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး ၎င်းတို့အထဲမှ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ် ကလေးတဦးက “လိုက်တောင်းတာ တနေ့ ဘတ် (၁၀၀-၂၀၀) နေ့တိုင်းရတယ်။ အမေက ကျောင်းမထားဘူး၊ ပိုက်ဆံပဲ တောင်းခိုင်းတယ်။ အရင်က ဖမ်းရင် တရက်ပဲ၊ အခု (၂) ရက်ရှိပြီ မလွတ်သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။ယင်းကလေးငယ်များသည် မဲဆောက်မြို့ မူဂျာဟေဒင်ရပ်ကွက်နှင့် မြို့စွန်ရှိ ကျူးကျော်တဲများ တွင် မိဘများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်၍ နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ၎င်း ကျူးကျော် ရပ်ကွက်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မကြာခဏ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးကာ တဲများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး၍ ၎င်းတို့အား မြန်မာဘက်ခြမ်း မြ၀တီမြို့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်လေ့ရှိသည်။အချို့ မိသားစုဝင်များမှာ ထိုင်းလူမျိုးများ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေပေါ်တွင် တလ ဘတ် (၃၀၀) နှုန်းဖြင့် မြေငှားခပေး၍ တဲထိုးနေထိုင်သူများလည်းရှိသည်။ မိဘအများစုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သားသမီးများ တောင်းရမ်း၍ ရသောငွေများဖြင့် မူးယစ်သောက်စားကာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်ဖြစ်ကြခြင်း၊ တွေ့ရာမြင်ရာတွင် မစင်စွန့်ခြင်း၊ ခြင်များ ပြေးစေရန် မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ခြင်းတို့ ကြောင့် ရပ်ကွက်လူထုနှင့် မကြာခဏ ပြဿနာဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်များက လာရောက်ဖမ်းဆီးလေ့ ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ကြသူများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် ဒေသ ခံများက ထိရောက်သည့် အရေးယူမှုများ မပြုလုပ်သဖြင့် အဆိုပါလူများမှာ အဖမ်းအဆီးရှိစဉ် ကာလသာ ခေတ္တရှောင်တိမ်းလျက်ရှိပြီးနောက် ယခင်အတိုင်း ပုံမှန်သွားလာနေထိုင်မြဲဖြစ်သည်။မဲဆောက် World Vision အဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်း နိုင်ကော့က “အဲလိုကလေးတွေ (၁၀၀) လောက်ရှိတယ်။ သူတို့အတွက် ကျောင်းနေဖို့ စီစဉ်ပေးတယ်။ မဲဆောက်မှာ အခမဲ့ကျောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့မိဘတွေကိုင်တိုင်က ကလေးကို ကျောင်းမထားချင်ဘူး။ ပိုက်ဆံပဲ လိုက်တောင်းခိုင်းတယ်။ သူတို့ကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်နဲ့ ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်ရင်တော့ သူတို့အနာဂတ်ကောင်းမှာပါ” ဟု ပြောသည်။အလားတူ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ကလေးငယ်များကိုလည်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီးသွားမည်ဟု မြို့နယ် ရဲမှူးကြီးက ပြောသည်။မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပညာရေးကော်မတီ (BMWEC) ၏ စစ်တမ်း အရ တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲဆောက်၊ မဲလမတ်၊ ဖို့ဖတ်၊ သုံးမြို့နယ်တွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ကလေး ငယ်များ စာသင်ကျောင်း (၅၄) ကျောင်းရှိပြီး လက်ရှိမြန်မာကလေးငယ် (၁၀,၀၀၀) ခန့် ပညာ သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါကျောင်းများတွင် မည်သူမဆို အခမဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ။ သတင်းသမားများအပေါ် စစ်အစိုးရ ပိုမိုကန့်သတ် 24 July 2008 မသင်းသီရိ ရန်ကုန်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းသမားတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေကို အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေဘက်ကို ခရီးသွားတာမျိုးတွေ အတော်လေး ကန့်သတ်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေမှာ သတင်းသွားယူဖို့အတွက် အစကတည်းက ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေအပေါ်မှာ ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးတာတွေ၊ ဗွီဒီယိုနဲ့ ဓာတ်ပုံကင်မရာတွေ ပါတယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်နယ်မြေကိုကျော်ပြီး ခွင့်မပြုတာတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ရန်ကုန် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တဦးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။"စဖြစ်ထဲကလည်း သူတို့က တရားဝင်လွှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နားလည်မှုနဲ့ပဲ သွားကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Tour Gate တွေကနေစပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိုင်ငံခြားသားပါရင် ကားကို လုံးဝသွားခွင့်မပေးဘဲ မြို့ထဲမှာပဲနေခိုင်းတယ်။ လေဘေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ သွားလို့မရတော့ပါဘူး။"ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့သိတာ နိုင်ငံခြားသားပါတဲ့ကားက မြို့တွင်းကနေလုံးဝ ထွက်ခွာလို့မရပါဘူး။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ သံလျင်မြို့နယ်မှာတောင်လေဘေးထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားသား သွားလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလောက်အထိတင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်ထားပါတယ်။"အခုလိုအခြေအနေတွေဟာ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကြီးတွေမှာ မုန်တိုင်းလွန်ကာလအခြေအနေများဆိုပြီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကြိုးစားပြီး အဲဒီဒေသက အခြေအနေတွေအပေါ် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူကပဲ အခုလိုခန့်မှန်းပြပါတယ်။"ကျနော်တို့ထင်တာက လေဘေးစဖြစ်တုန်းက နိုင်ငံခြားသားတွေက စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ပဲထိုးဖောက်သွားကြတာပဲ။ အများစုက မကြည့်ပေမယ့် အနည်းစုက နိုင်ငံခြားသတင်းတွေမှာ လေဘေးဖြစ်နေတဲ့ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်တွေကို သူတို့ တွေ့သွားကြတယ်။အဲတော့ သူတို့အတွက်လည်း ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိတယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ အဲဒါကြောင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်ပိတ်လိုက်တာလို့ ယူဆပါတယ်။"ပုဂ္ဂလိက ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တဦး ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခွင့်ပြုမိန့်ရတဲ့ NGO လို ကူညီရေးအဖွဲ့တွေ၊ MSF နယ်ခြားမဲ့ ဆရာဝန်များအဖွဲ့လို ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ ချွင်းချက်နဲ့ စာရွက်စာတမ်းပြပြီး ဒီနေရာတွေကိုသွားခွင့်ရနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေ အနေနဲ့လည်း ဒီသတင်းတွေကိုရယူဖို့ အတော်လေး ကြိုးစားရပါတယ်။ မသင်္ကာရင် မသင်္ကာသလို ကင်မရာတွေစစ်ဆေးတာ၊ သတင်းထောက်ကတ်ပြားနဲ့ ဌာနကို စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်သလို သူတို့လိုအပ်မယ်ထင်ရင် ကင်မရာတွေကို ဖွင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး အထဲက ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကို အဖျက်ခံရတဲ့အထိ ရှိတယ်လို့ ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေက ပြောကြပါတယ်။အဲဒီလို ကန့်သတ်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့အတူ ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားတင်ပြရာမှာလည်း အလိုက်သင့် ရေးသားတင်ပြနေရတဲ့အကြောင်းကို အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တဦးက အခုလို ရှင်းပြထားပါတယ်။"အများအားဖြင့်တော့ မရဘူး။ အခုရေးနေကြတာတော့ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်လှူတယ်၊ ဂျပန်က ဘယ်လောက်လှူတယ်၊ အဲလို ကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲ။ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်၊ အလှူရှင်တွေ လုံလုံလောက်လောက် မရသေးဘူး၊ အဲလိုသတင်းတွေတော့ ရေးလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ အလှူသတင်းတွေ၊ ဂျပန်အစိုးရက ဘယ်လောက်လှူတယ်၊ ဘာတွေပြန်ဆောက်ပေးမယ်၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးပြန်ဆောက်ပေးမယ်၊ အိမ်တွေ ပြန်ဆောက်ပေးမယ်၊ အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ရေးလို့ရတယ်။"ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေအနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားခွင့်မရပေမယ့်နိုင်ငံခြားသတင်းသမားတွေနဲ့ သတင်းဌာနတွေကတော့ လက်ရှိအခြေအနေမှန်တွေနဲ့မြင်တာကိုရေးတာလို့ သူကဆိုပါတယ်။"နာဂစ်ပြီးမှ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အားလုံးက သူ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူ လာကြတယ်။ အမေရိကန် သတင်းထောက်တွေလည်း လာတယ်၊ ကမ္ဘာကျော်သတင်းဌာနတွေက သတင်းထောက်တွေလည်း လာတယ်။ လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့က ဘယ်ကြိုက်မလဲ။ များသောအားဖြင့် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တွေအပေါ်မှာတော့ သူတို့က နိုင်တာပေါ့။ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်က သူတို့လက်ထဲမှာရှိတာကိုး။"နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ကြတော့ သူတို့က မြင်တာရေးတာလေ။ ကောင်းတာလည်းရေးမယ်၊ ဆိုးတာလည်းရေးမယ်၊ ပြီးတော့ ဟန့်တားလို့လည်း မရဘူး။ အဲတော့ သူတို့ကနိုင်ငံခြားသတင်းထောက် မပြောနဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားကို ကားပေါ်မှာမြင်တာနဲ့ကို လန့်နေပြီ။ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်က သူတို့ထင်သလို မကောင်းရေးတာမဟုတ်ဘူး၊မြင်တာကိုရေးတာ။ အဲဒီ မြင်တာရေးတာကို သူတို့က မခံနိုင်တာ။"မုန်တိုင်းလွန်ကာလ သတင်းသမားတွေရဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အစည်းအဝေး ကုလ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ခေါ်ယူ 24 July 2008 ဦးသားညွန့်ဦး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမခေါ်ခင် တရက် မနေ့ကတော့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တိတိပပ ရလာဒ်တွေမထွက်ခဲ့ပေမယ့်လို့ ဒါဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာ ဘယ်လိုဆွေးနွေးချက်တွေ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်မလဲဆိုတာ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ကနေ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြား ညှိုနှိုင်းတိုင်ပင်တဲ့ သဘောလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဦးသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးပါတယ်။နယူးယောက် ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတော့ အခု ဇူလှိုင် ၂၄ အမေရိကန်စံချိန် မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာ အရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ကြမှာပါ။ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတွေအကြား မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေကို စုဆောင်းတာ၊ ညှိုနှိုင်းတာလုပ်တဲ့အနေနဲ့ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကနေ အခု မြန်မာမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူတာလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရသူတဦးဖြစ်တဲ့ Ms. Sound-AH က ဗွီအိုအေကို အခုလို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ "ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်အနေနဲ့ ဒီကနေ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးအတွင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီက အခုလာမယ့် သြဂုတ်လလယ် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ဖွဲ့စည်းထားပြီးကတည်းကဆိုရင် အခု ၄ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးလုပ်တာပါ။" မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရေး သဘောကွဲလွဲမှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများ ပါဝင်တဲ့ အထွေထွေ ညီလာခံကနေပဲ မြန်မာ့အရေးကို ဆုံးဖြတ်ချက်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ အခု မြန်မာ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံများဖွဲ့ရတဲ့ သဘောကလည်း လုံခြုံရေး ကောင်စီထက် ကျယ်ပြန့်တဲ့ အစုအဖွဲ့ ဖြစ်လာအောင် လုပ်တဲ့သဘောလို့ မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူတွေက ယူဆပါတယ်။ ဒီကနေမှ အတွင်းရေးမှုးချုပ်က ကြားဝင် ညှိုနှိုင်းပြီး အခြားအဆင့်တွေအတွက် ဘယ်လို ဆက်မလဲဆိုတာ သဘောထားတွေ စုဆောင်း ညှိုနှိုင်းတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအသင်းကရော တကယ်တမ်း အထွေထွေ ညီလာခံလောက် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပ့ါမလား။ ဒါက မစ္စတာဂင်ဘာရီခရီးစဉ်အတွက်ပဲ သက်သက် ညှိုနှိုင်းနေတဲ့သဘော မသက်ရောက် နေဘူးလားလို့ မေးတော့ ပြောခွင့်ရသူ မစ္စ ဆောင်အာ့က အခုလို ဖြေပါတယ်။ "ဒါဟာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို အတော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ အတွင်းရေးမှုးချုပ်အနေနဲ့ သူဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဒီအဖွဲ့နဲ့ အရင်ကနဦး ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်လိုပါတယ်။ အစည်းအဝေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခြေအနေတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကို အပြန်အလှန်အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတဲ့သဘောပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ မစ္စတာဂန်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံကို မသွားခင် အမြင်တွေ ဖလှယ်ကြတဲ့သဘောပါ။ မစ္စတာဂန်ဘာရီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသွားတဲ့ အခုခရီးစဉ် ဒါမှမဟုတ် ခရီးစဉ်တွေအတွက်ပဲသက်သက် ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အတွင်းရေးမှုးချုပ်က အလေးပေးပြောထားပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ညှိုနှိုင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ပုံမှန်လမ်းကြောင်း တခုဖြစ်ပါတယ်။" အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ ဒီမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့မှာတော့ သြစတေးသျှ၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်။ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား ဂျပန် နော်ဝေး ရုရှား စင်ကာပူ တောင်ကိုရီးယား ထိုင်း ဗြိတိသျှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗီယက်နာမ် ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ဥရောပ မိသားစုတို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။ မနက်ဖြန် လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတော့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကနေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆိုပြုချက်အမျိုးမျိုးရှိနေပေမယ့်လို့ ယတိပြတ် တခုခုကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာ အခုအချိန်အထိ ညှိုနှိုင်းလို့မပြီးသေးပြီလို့သိရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာတော့ အာဆီယံဦးဆောင်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေက ကမကထလုပ်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့ကိစ္စလည်း ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တခုခု ချမှတ်ရေး အရင်ကထက်က ကြိုးစားထားတာရှိပေမယ့် အခုမနက်ဖြန်မှာ အဆိုပြုချက်တခုခု ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတခုခု တင်ပြချေရှိမရှိ မသိရသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တုန်းက ဗြိတိသျှနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တင်သွင်းခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုတော့ တရုတ် ရုရှားတို့က ဗီတိုသုံးပယ်ချခဲ့တာမို့၊ ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီထဲ ကာဆီးကာဆီး လုပ်သွားဦးမယ်လို့တော့ လေ့လာသူတွေက ယူဆထားကြပါတယ်။ ဆိုက်ကလုံးအလှုငွေ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်လက်ထဲ မရောက်စေရန် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့က သတိပေး 24 July 2008မြန်မာနိုင်ငံက နာဂစ် ဆိုင်ကလုံး လေမုန်တိုင်းဒဏ် ခံလိုက်ရသူများအတွက် ပေးတဲ့ လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့များ တခြားဘက်မှာ စစ်အစိုးရက လွှဲပြောင်း မသုံးစွဲရေး နိုင်ငံတကာ အလှူ့ရှင်များက သေခြာအောင် လုပ်ပါလို့ Human Rights Watch ခေါ် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပေးခဲ့တဲ့ အထောက်အပံ့များ ဘယ်လို သုံးစွဲတယ်ဆိုတာ သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အလှူ့ရှင်များ ပူးတွဲ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အဖွဲ့က စောင့်ကြပ်သင့်တယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာမှာလည်းပဲ လုပ်ငန်းဟာ ထင်သာမြင်သာရှိပြီး တာဝန်ယူမှုလည်း ပါဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ ထောက်ပြထားတာပါ။ မေလမှာ လေပြင်းမုန်းတိုင်း ကျရောက်ပြီးကတည်းက နိုင်ငံခြား ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး ကျွမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ ခရီးသွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ် ချုပ်ခြယ်ထားပြီး ကယ်ဆယ်ရေးမှာ သွားရောက်ကူညီကြတဲ့ ဒေသခံများကိုလည်း ဖမ်းဆီးခံပုံကို လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ထောက်ပြထားပါတယ်။ အလှူ့ရှင်များအနေနဲ့ လူသားချင်း စာနာမှု အခြေခံမူများအတိုင်း အတိအကျလိုက်နာအောင် စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးပါလို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ WHO ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်က တာဝန်ခံ ရစ်ချက် ဂါဖေးလ် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး သူအရင်က ထင်ထားသည်ထက် အစိုးရက လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို ပိုမိုကူညီထောက်ပံ့ နေတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းကို သွားရောက် ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု ဒါန အကြီးအကဲ ဂျွန်ဟုမ်းဟာ ဒီကနေ့မှာ နေပြည်တော်မှာ စစ်အစိုးရ တာဝန်ခံများနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ Burmese Officials ask Canada for Help A Burmese advocacy team is seeking Canada’s help for 100,000 people in Burma’s Chin State who are facingaserious food crisis asaresult ofarat invasion.The mass flowering of bamboo has led to an explosion of rats which are destroying basic crops and paddy fields in the region. Chin State covers almost 14,000 square kilometres, roughly one fifth of which is covered by bamboo.“The situation is atacritical point,” said Salai Bawi Lian Mang, head of the Chin Human Rights Organization (CHRO) which is monitoring the situation. “The people of Chin State are on the brink of starvation.” he stated inanews release.The mass flowering of bamboo is an unusual natural phenomenon that occurs every 50 years in Chin State and in bordering Mizoram State in India. At least 200 Chin villages along the Burma, India and Bangladesh border are directly affected. "The people of the western border of Burma had little assistance from the international community while the eastern border has been enjoying international support," said Salai Victor Lian,aprominent Chin political figure working with Burma’s Ethnic Nationalities Council. Before his arrival in Ottawa, Lian was in the United Kingdom meeting with ministers and senior government officials. Recently, Chin activists in India formed the Chin Famine Emergency Relief Committee and started to take necessary action to help the people of Chin State. Meanwhile, well known singers including Burma’s Sung Tin Par are givingaseries of concerts in Thailand, Malaysia and Singapore to raise funds for the people of Chin State.The Canadian Friends of Burma is also working with the CHRO to highlight the situation in Canada
အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း :)